नेपाल आज | रुकुम घटनालाई ट्वीस्ट गर्न खोजियो तर यो नरसंहार नै हो - नेकपा नेता आचार्य (भिडियोसहित)
सोमबार, २६ जेठ २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य निरज आचार्यले रुकुम पश्चिम घटना ठुलो नरसंहार भएको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुमस्थित आफ्नी ‘उच्च जातीय’ मल्ल थरकी प्रेमिकाको घर जाने प्रयत्न गर्दा जाजरकोटका २१ वर्षीय नवराज विक र उनका ५ जना साथीहरू मारिएका थिए ।
नेपाल आजसंग कुरा गर्दै उनले यो घटनालाई विभिन्न बहानामा ट्वीस्ट गर्न खोजिएको भन्दै लकडाउनको समयमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेश गर्नु युवाहरुको कमजोरी भए पनि त्यो गल्तिको सजाय नरसंहार हुन नसक्ने बताए ।
'यो घटनाको दुई वटा कोणबाट चर्चा हुने गरेको छ । एउटा जाजरकोटबाट लकडाउनको समयमा उन्नाइस उन्नाइस जना युवाहरु तत्ति लागेर अर्काको गाउँमा जबर्जस्ति अर्काको छोरी लिन ठिक थियो ? यो गलत हो भन्ने कोणबाट बहस सुरु भइरहेको छ । अर्को- गल्ति उनीहरु (युवाहरु)को हो, गाउँलेहरुको होइन र गाउँलेले भगाउने क्रममा उनीहरु भाग्दा मरेका हुन् भन्ने ढंगबाट ट्वीस्ट गरेर यतातिर लान खोजिएको छ।' उनले भने -युवाहरु लकडाउनको समयमा एउटा जिल्लाबाट पार गरेर अर्को जिल्ला प्रवेश गर्नु उनीहरुको कमजोरी थियो गल्ति थियो तर त्यो गल्तिको सजाय त नरसंहार हुन सक्दैन नी । समुहिक हत्या त्यसको सजाय हुन सक्दैन ।'
युवाहरुले गल्ति गरेको भए राज्य , कानु र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्नसक्ने अवस्था हुँदा हुँदै सामुहिक कत्लेआम कुनै पनि हिसाबले तर्क संगत कुरा हुननसक्ने उनको भनाइ छ । नेता आचार्यले अहिले हरेक व्यक्तिले घटनाको अनुसन्धान आफै गरेर आफै निर्णय सुनाउन थालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कतिपय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता र युट्युबरहरुले घटनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको गुनासो पोखे ।
'हरेक व्यक्तिले घटनाका बिषयमा आफै अनुसन्धान गर्छन् र यसको निर्णय आफै सुनाउछन । मैले यो देखे र यो नै हो कुरा भनेर फेसबुकमा लेखिदिन्छन । कतिपय युट्युबका साथीहरुले घटनाको एउटा एउटा पाटोलाई त्यो ढंगले ल्याइदिनुहुन्छ ।' उनले भने -'यसले गर्दा यो घटनाको अनुसन्धान प्रभित भयो की ? यसले गर्दा कतै दिग्भ्रमित हुने स्थिति सिर्जना गर्यो की ? अथवा यसले गर्दा घटनामा संग्लन रहेका अपराधिहरु जोगिने खतरातिर पो जान्छ की भन्ने डर हामीलाई लागिरहेको छ ।'
कसैले हाेइन भने पनि घटनामा कहिँ न कहिँ जातीय रुप प्रकट भएको उनले ठोकुवा गरे । नवराज विकसंग मल्ल ठकुरीको छोरीको बिहे स्वीकार्य नभएको हुनसक्ने उनले बताए । तर यो घटनाले जातभात भन्दा पनि माथि उठेर मानवीय हिसावले हेर्नुपर्ने र त्यो अत्यन्तै बरबर घटना भएको बुझाई छ । यो घटनामा जुससुकै तहको व्यक्ति संग्लन भए पनि त्यसलाई कारवाही हुनुपर्ने हुनको माग छ । हेर्नुहोस भिडियो: